यसको अधिकतम बनाउनको लागि आईफोन X को सबै तरिकाहरू आईफोन समाचार
यसबाट अधिक प्राप्त गर्नका लागि आईफोन एक्सका सबै तरिकाहरू
लुइस प्याडिला | | आईफोन एक्स, ट्यूटोरियल र म्यानुअल
एप्पलले दस बर्ष भन्दा बढि विश्वको सबैभन्दा प्रख्यात स्मार्टफोनको पहिलो मोडल शुरू गरेदेखि नै आईफोन एक्स ठूलो परिवर्तन भएको छ। यो एक नयाँ फ्रेमलेस डिजाइन मात्र होईन, तर एप्पलले होम बटन पनि हटाएको छ, र यसले सौंदर्य परिवर्तनको साथसाथै स we्केत गर्दछ कि हामीले उपकरण ह्यान्डल गर्ने तरिका पनि परिवर्तन हुन्छ।
एप्लिकेसनहरू बन्द गर्दै, मल्टिटास्कि opening खोल्दै, पुन: क्षमता, अनुप्रयोगहरू बीच स्विच, नियन्त्रण केन्द्र, सूचना केन्द्र वा उपकरण बन्द पनि गरीरहेका छन्। पहिलो आईफोन देखा पर्दा आईफोन एक्समा भिन्न प्रकारका कार्यहरू गर्छौं जुन हामी प्रयोग गर्छौं भन्दा। यस भिडियो र लेखमा हामी तपाईंलाई सबै परिवर्तनहरू बताउँदछौं ताकि तपाईं पहिलो दिनबाट आईफोन एक्स कसरी ह्यान्डल गर्ने जान्नुहोस्।
1 इशाराहरूका साथ मल्टिटास्क र स्विच अनुप्रयोगहरू
2 एक टच स्क्रीन वेक अप
3 नियन्त्रण केन्द्र, विजेटहरू र सूचना केन्द्र
4 शट डाउन, स्क्रिनशट, एप्पल पे र सिरी
इशाराहरूका साथ मल्टिटास्क र स्विच अनुप्रयोगहरू
त्यहाँ अब होम बटन छैन, कुनै प्रयोगकर्ताहरूको डरलाग्दो डर छैन जुन एक दिनबाट स्क्रिनमा भर्चुअल बटन प्रयोग गर्थे जसले गर्दा आईफोनको भौतिक बटन टुक्रिने छैन। अन्तमा, वर्ष बित्तिकै साइल्डियामा अनुप्रयोगका बारे खोजीका लागि हामी आईफोनलाई इशाराहरू मार्फत पूरा प्रयोग गर्न सक्छौं। एउटा अनुप्रयोग बन्द गर्नु, मल्टिटास्किंग खोल्नु र अनुप्रयोगहरू बीच स्विच गर्नु इशाराहरूको लागि छिटो र सजिलो धन्यवाद:
स्क्रिनको तलबाट माथि स्वाइप गरेर अनुप्रयोगहरू बन्द गर्नुहोस्
समान इशाराको साथ मल्टिटास्किंग खोल्नुहोस् तर स्क्रिनको बिचमा अन्तमा होल्डिंग
बायाँबाट दायाँ, स्क्रीनको तल स्लाइडिंग द्वारा अनुप्रयोगहरू बीच स्विच गर्नुहोस्।
त्यहाँ अर्को इशारा छ जुन एप्पलले हामीलाई बताउँदैन, तर त्यसले आधिकारिक इशारा भन्दा द्रुत मल्टिटास्कि open खोल्न अनुमति दिन्छ, र त्यो तल्लो बायाँ कुनामा देखि माथिल्लो दाहिने कुनामा स्लाइडिंग गरेर हो, विकर्ण। यसको साथ हामी मल्टिटास्किंग लगभग द्रुत रूपमा खोल्ने छौं, एक सst्केत जुन तपाइँ एक पटक यसको प्रयोग गरी जानुभयो स्क्रिनको बीचमा स्लाइड हुनु र एक सेकेन्डको लागि समात्नु भन्दा धेरै सहज छ।
अनुप्रयोगहरूको परिवर्तनको सम्बन्धमा, स्क्रिनको बायाँ देखि दायाँ तिर दाहिने भागको इशाराले तपाईंलाई पहिले प्रयोग गरिरहेको अनुप्रयोगमा पुर्याउँदछ, र यदि तपाईं दोहोर्याउनुहुन्छ भने सबै अनुप्रयोगहरू कालक्रम क्रममा जानुहुन्छ, सबैभन्दा भर्खरको भन्दा पहिले। यदि एकपटक एकपटक तपाइँले विपरित इशारा गर्नुभयो भने, दायाँबाट बाँया सम्म, तपाइँ पछाडि अघिल्लोमा फर्किनुहुनेछ, र यस्तै, जब सम्म तपाइँ अनुप्रयोग प्रयोग गर्नुहुन्न।। एक पटक अनुप्रयोग पहिले नै कुनै चीजको लागि प्रयोग गरिसकेपछि, यो कालक्रम क्रममै पहिलो हुन्छ र दायाँ देखि बाँया इशाराले काम गर्दैन, जब सम्म तपाइँ सञ्चालन दोहोर्याउँनुहुन्न।
एक टच स्क्रीन वेक अप
धेरै पुस्ताहरूका लागि, आईफोनले आफ्नो स्क्रिन सक्रिय गरिसक्यो जब यसलाई सार्दा (आईफोन s एस पछि)। यदि तपाईंसँग टेबुलमा आईफोन छ र तपाईंले यसलाई हेर्न यो उठाउनुहुन्छ, तपाईंले स्क्रिन खोल्न केही गर्नुपर्दैन। तर अब आईफोन एक्सले पनि यसलाई छोएर स्क्रिन सक्रिय पार्न अनुमति दिन्छ, यसमा सानो ट्यापको साथ।। थप रूपमा, साइड बटनले पनि स्क्रिन खोल्नेछ यदि हामी यसलाई थिच्नुभयो भने।
हामी दुई नयाँ सर्टकटको साथ लक स्क्रिनमा छौं: क्यामेरा र फ्ल्यासलाइट। क्यामेरा केही समयको लागि हामीसँग भएको थियो र दायाँ देखि बायाँ स्वाइप गर्ने इशाराले फोटोहरू वा भिडियोहरू खिच्नको लागि सिधा अनुप्रयोग खोल्दछ, तर अब हामीसँग यो नयाँ विकल्प पनि छ। दुबै बटनहरू, दुबै क्यामेरा र फ्ल्यासलाइट,3डी छोएर उनीहरू सक्रिय हुन्छन्त्यो हो, केवल तिनीहरूलाई छुने द्वारा मात्र स्क्रिनमा हार्ड थिचेर। साँच्चिकै आरामदायी छ कि दुई कार्यहरू लक स्क्रिनबाट पहुँच योग्य छन् र तिनीहरूलाई खोल्नको लागि कन्ट्रोल सेन्टर पनि खोल्नु पर्दैन।
नियन्त्रण केन्द्र, विजेटहरू र सूचना केन्द्र
यी तीन क्लासिक आईओएस एलिमेन्टहरू पनि नयाँ आईफोन एक्सको साथ केही हदसम्म परिमार्जन गरिएको छ। कन्ट्रोल सेन्टर सम्भवतः सबैभन्दा पहिले विचलित गर्ने तत्व हो जसले आईफोन एक्सलाई यसको परिवर्तनहरूको बारेमा केहि पनि थाहा नबुझिकनै उठाउँछन्, किनकि यो इशाराले यसलाई खुलाउने छ। आमूल भिन्न। यदि हामीले नियन्त्रण केन्द्र प्रदर्शन गर्न कुनै आईओएस स्क्रिनमा तलबाट माथि स्वाइप गर्न विकल्प प्रयोग गर्नु अघि, अब यो पर्दाको माथिबाट स्वाइप गरेर हासिल गरियो, माथिल्लो दाहिने कुना, तल।
र यो माथि दायाँबाट गर्नुपर्नेछ, किनकि यदि हामीले माथिल्लो स्क्रिनको कुनै पनि अन्य भागबाट गर्छौं भने, के खोल्ने सूचना केन्द्र हुनेछ, जुन आईओएस ११ मा लक स्क्रिनसँग मिल्दोजुल्दो छ, फ्ल्यास प्रकाशको सर्टकटको साथ पनि। र क्यामेरा पूर्वनिर्धारित सूचना केन्द्रले भर्खरका अधिसूचनाहरू मात्र देखाउँदछ, यदि हामी सब भन्दा पुरानो अवलोकन गर्न चाहन्छौं भने तलबाट माथि सम्म सर्नुपर्नेछ। प्रदर्शित गर्न, यदि कुनै छ भने। सूचना केन्द्रमा "x" मा थ्रीडी टच गर्नाले हामीलाई सबै सूचनाहरू एकैचोटि मेटाउने विकल्प दिनेछ।
र विजेटहरू कहाँ छन्? लक स्क्रिन र स्प्रि theबोर्डमा दुबै यो तत्व अपरिवर्तित रहन्छ, यो अझै "बाँयामा" रहन्छ। मुख्य डेस्कटपबाट, लक स्क्रिनबाट वा सूचना केन्द्रबाट हामी विजेट स्क्रिन खोल्न सक्दछौं बाँयाबाट दाँया स्लाइडिंग, र त्यो समान स्क्रिनमा हामी तिनीहरूलाई सम्पादन गर्न, थप्न वा मेटाउन सक्दछौं जुन यो हाम्रो मनमा जस्तो रहिरहन्छ।
शट डाउन, स्क्रिनशट, एप्पल पे र सिरी
ध्यान दिनुहोस् कि यस समयमा हामीले कुनै पनि भौतिक बटनको बारेमा कुरा गरेका छैनौं, र यो यस आईफोन एक्सको मुख्य विशेषता हो। तर त्यहाँ अझै पनी एक बटन छ जसले केही प्रकार्यहरू गर्दछ जस्तै सिरी, एप्पल पे, उपकरण बन्द गर्नुहोस् वा स्क्रिनसट लिनुहोस्।: साइड बटन। र यसको अपरेसन यति धेरै परिवर्तन भएको छ कि यो सुरुमा सब भन्दा भ्रमपूर्ण भयो।
अब एप्पल भुक्तानी संग भुक्तान गर्न हामी कसरी शुरू बाट एप्पल वाच मा प्रयोग गरीन्छ समान तरीका बाट सुरू गर्नु पर्छ: साइड बटन दुई पटक थिचेर। हामी फेस आईडी द्वारा चिन्न सकिन्छ र त्यसपछि हामी कार्ड रिडर टर्मिनलमा भुक्तान गर्न सक्दछौं। एप्पल पे टर्मिनलमा आईफोन अघि आउनु भन्दा पहिले यो सिधा खोलियो, तर किनभने हामीले सजिलै टच आईडीमा फिंगरप्रिन्ट राख्नुपर्‍यो। आईफोनलाई हेर्दा अहिले अनुहारको पहिचान लगभग तत्कालै भएको छ, आईओएसले समस्याबाट बच्नको लागि एप्पल पे सचेतपूर्वक सक्रिय गर्नेहरू हुन आग्रह गर्दछ।
सिरी अझै भ्वाइस कमाण्ड "हे सिरी" द्वारा प्रयोग गरीन्छ, जबसम्म हामी यसलाई हाम्रो आईफोनमा आईओएस सेटिंग्सको प्रारम्भिक अनुकूलनको समयमा कन्फिगर गर्दछौं। तर हामी एप्पलको भर्चुअल सहायक खोल्नको लागि एक भौतिक बटन पनि प्रयोग गर्न सक्छौं: साइड बटन होल्डिंग गरेर। यो उपकरण बन्द गर्न इशाराको लामो समय देखि छैन, तर सिरीलाई केहि सोध्न।
र म कसरी टर्मिनल बन्द गर्छु? ठीक छ, भोल्युम बटन (जे भए पनि) र साइड बटन एकै समयमा थिचेर। IOS आपतकालीन स्क्रीन आपतकालीन कल गर्न वा आईफोन बन्द गर्न विकल्पको साथ खुल्नेछ। याद गर्नुहोस् कि यदि यो स्क्रिन देखा पर्दछ अनुहार आईडी असक्षम हुनेछ जब सम्म तपाईं फेरि आफ्नो अनलक कोड प्रविष्ट गर्नुहुन्न।
अन्तमा, स्क्रिनसट आईफोन एक्सको साथ पनि परिवर्तन हुन्छ, र अब यो साइड बटन र भोल्युम अप बटन थिचेर गरिन्छ। IOS 11 को सुरुवात पछि नै भएको छ, हामी त्यो स्क्रीनशट, क्रप, एनोटेशनहरू थप्न सम्पादन गर्न सक्छौं, आदि र हामी यसलाई जहाँ चाहिन्छ साझा गर्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » ट्यूटोरियल र म्यानुअल » यसबाट अधिक प्राप्त गर्नका लागि आईफोन एक्सका सबै तरिकाहरू
तपाईं एक सेकेन्डको लागि केन्द्रमा पकड नगरी तल्लो केन्द्र क्षेत्रबाट स्लाइडिंग गरेर मल्टिटास्किंग पनि खोल्न सक्नुहुन्छ।
यो साधारणतया स्लाइडिंग हुन्छ र जब तपाइँ केन्द्रमा पुग्नुहुन्छ र छोड्नुहोस्। तत्काल मल्टिटास्किंग खुल्छ।
प्लेटमा जानको साथ भिन्नता यो हो कि जब तपाईं प्लेटमा जानुहुन्छ तपाईं पक्रिनु भएको बेरि स्लाइड गर्नुहुन्छ। यदि यो पत्ता लगाउँछ कि तपाईं एक सेकेन्डको दशौं भाग पनि रोक्नुहुन्छ, र जान दिनुहोस्, मल्टिटास्किंग खुल्छ।
तपाईंले भन्नुभएको दोस्रो प्रख्यात पर्खाइको तथ्य केवल यो हो किनभने एनिमेसनले समयको बाँया अनुप्रयोगका बाँकी "अक्षरहरू" देखि देखा पर्दछ। तर तपाईंले एनिमेसन देखा पर्न वास्तवमै प्रतिक्षा गर्नु पर्दैन, यसलाई केन्द्रबाटै प्रयास गर्नुहोस्, एकै समयमा रोक्नुहोस् र रिलिज गर्नुहोस्।
Iñaki लाई जवाफ दिनुहोस्
इजियो अडिटोर भन्यो
अनलक वालपेपर म कहाँ पाउन सक्छु?
Ezio अडिटोरलाई जवाफ दिनुहोस्
जिमी आईमैक भन्यो
र जब म तपाईंको आईफोनको स्क्रीन5मा थिए र तपाईं पहिलो स्क्रिनमा जान चाहानुहुन्छ, गृह बटन थिच्नाले तपाईं पहिलो स्क्रिनमा लैजानुहुन्छ, आईफोन एक्सको साथ यो अवस्थित छैन, हैन?
जिमी आईम्याकलाई जवाफ दिनुहोस्
'सक्रिय गर्न प्रेस' निष्क्रिय गरेर तपाईंको आईफोन एक्समा ब्याट्री बचत गर्नुहोस्।
यो सिरी अनुवादक आईओएस ११ मा कसरी काम गर्दछ